Root မလုပ်ဘဲ မြန်မာစာကို ဘယ်လိုဖတ်မလဲ? — MYSTERY ZILLION
Root မလုပ်ဘဲ မြန်မာစာကို ဘယ်လိုဖတ်မလဲ?
October 2011 edited October 2011 in Android
ကျွန်တော် Android Device တစ်လုံးဝယ်ထားလိုက်တယ် ဗားရှင်းက 2.1
PDF စာအုပ်တွေတော့ မြန်မာလိုဖတ်ရတာ အဆင်ပြေပေမယ့် မြန်မာ Website တွေပေါ်က မြန်မာစာတွေကို ဖတ်ချင်လွန်းလို့ အကြိမ်ကြိမ် Root လုပ်တယ် မရဘူး။ Device နဲ့ ဆိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ font changer သုံးတော့လည်း System folder က Read Only ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှမရဘူး NAND unlock လုပ်ပါလို့ပဲပြောတယ်။ :-((
ကျွန်တော် အလျှော့ပေးလိုက်တယ်။ Device ကို Root လုပ်လို့မရတော့ ဘလော့ဂါပီပီ ဘလော့ကို Root လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်က JAVA လည်းနားမလည်၊ HTML ကို စရေးဆို <HTML> ကနေ မတက်သေးဘူး။ Google Web Font တွေကို ကြည့်ပြီး အဲဒီနေရာမှာ မြန်မာစာတစ်ခုလောက်ပါရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တောင့်တမိပါတယ်။ :-W
ဒီလိုနဲ့ ဟိုရှာဒီရှာ တဝဲဝဲလည်ရင်း နောက်ဆုံးမှာတော့ တစ်ခုတွေ့သွားခဲ့ပြီ။ ဘယ်ကတွေ့ခဲတာလဲ ဘာကိုတွေ့ခဲ့တာလဲ???
http://lannthit07.blogspot.com/ ကိုသာ မြန်မာစာလုံးမရှိတဲ့ Android Device နဲ့ သွားကြည့်ပေတော့ Java Script အလုပ်လုပ်တဲ့ ဘယ် Web Browser နဲ့မဆို ရပါလိမ့်မယ်။ Java Script အလုပ်မလုပ်တဲ့ Sony Vivaz i5 လိုဖုန်းမျိုးတွေအတွက်တော့ အဆင်မပြေပြန်ဘူး။
အဲဒီ JAVA Script လုပ်ဆောင်ချက်လေးက စာလုံးတွေကို အလိုလို ဓါတ်ပုံပြောင်းပစ်လိုက်တာဗျာ။ ဒါကြောင့် စစချင်းပေါ်လာတဲ့ လေးထောင့်တုံးလေးတွေကနေ မြန်မာစာ ပြောင်းသွားဖို့ ကွန်နက်ရှင်အပေါ်မူတည်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းလောက် စောင့်ရပါတယ်။ ~O)
ပညာရှင်တွေကို ကျွန်တော် တောင်းဆိုချင်တာက Google Web Font လိုမျိုး ဘာလို့ မလုပ်ကြရတာလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ Zawgyi ရယ် Unicode ရယ်လို့လည်း မရှိပါဘူး။ သူသန်ရာ သန်ရာကို စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တာပဲလေ။ Google Web Font လိုဟာမျိုးနဲ့ဆို ထိန်းနိုင်မှာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့် တစ်ယောက်တည်း အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက် မှားရင်လည်း မှားနေပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာစာကို အဲဒီ Google Web Font လိုဟာမျိုး ရှိခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို လမ်းညွှန်ပါဦးဗျာ။ ကျွန်တော် လိုအပ်နေပါတယ်။
October 2011 Administrators
http://mywebfont.appspot.com is same like google web font.
for bookmarklet for website , you can try zawgyi Zawgyi embed iOS or Zawgyi embed bookmarklet from http://dl.dropbox.com/u/283860/host/bookmarklet/index.html
Android မှာ မမြင်ရသေးတာတော့ ဝမ်းနည်းစရာပဲ။ =(
ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ဒီဆိုဒ်ကို Galaxy Tab မှာ ကြည့်လို့မရတာ အရမ်းစိတ်ညစ်တယ်။ iOS ပြောင်းချင်စိတ်တောင် ပေါက်သွားတယ်.
Root မလုပ်နိုင်တဲ့ Android သမားတွေအတွက် "စိလော့စိလယ် စားလယ်" ဆိုတားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ OS တွေမှာ မြန်မာစာပေါ်လာတဲ့အတွက်တော့ ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ။
Android ရဲ့ နဂိုပါပြီးသား Browser ထက်စာရင် Opera mini က ပိုမြန်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ :-S
မကြာခင်ရက်ပိုင်းကပဲ Android Market မှာ 1st Myanmar Android Browser ကို ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Browser ကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် Root လုပ်စရာမလိုတော့ဘူပေါ့။ Developer အမည်မှာ ကိုထင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Facebook Profile Page ကတော့ https://www.facebook.com/profile.php?id=100000514343176 ဖြစ်ပြီး 1st Myanmar Android Browser Fan Page ကတော့ https://www.facebook.com/pages/1st-Myanmar-Android-Browser/352311588118092 ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Andriod ver 2.3 အထက်သုံးတယ်ဆိုရင်
As i found on internet, only with certain devices, such as Galaxy Tab, can change font by installing Zawgyi_One.apk via setting menu.
Andriod 2.3 ဖုန်းထဲမှာ ဇော်ဂျီ Zawgyi_One.apk သွင်းပြီး ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲ ကျွန်တော့်ဖုန်းက Galaxy မဟုတ်ဘူးဗျ။
This way should be ok for you.
I have just offically updated my galaxy s2 firmware to ics 4.0.3 in sg.The problem is I can't read myanmar font on web page and word page ! but i can read and write on memo,sms and phone book by using zawgyi font and frozen keyboard v0.3. Can someone help to share information how to install myanmar font on ics 4.0.3 without rooting. thanks !
အနှစ်ချုပ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမိစကားကို ဆိုက်ဒ်တွေကမျိုးစုံတင်နေတာကစတာပါသကော။ error ကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားကျပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးအဖြေရလာတာက တော့ အမိမြေက unicode ကိုဂဃနဏ မသိတာကိုဖြေရှင်းရမှာပါဗျာ။ ဘယ်သူမှ စိတ်မညစ်ပဲ ပစ္စည်းတွေလဲ မပြောင်းကျပါနဲ့။ စိတ်ရှည်၂လေး ဖတ်ပေးကျပါလို့။